Dinamik-bot အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Dinamik-bot အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
Dinamik-bot အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၄:၁၇ ၀၄:၁၇၊ ၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၈‎ အရေးမကြီး ပေကျင်း မြို့တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying sk:Medzinárodné letisko Peking Capital to sk:Medzinárodné letisko Peking
၀၉:၀၄ ၀၉:၀၄၊ ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၃‎ အရေးမကြီး ကြားမှနေ၍တိုက်ခိုက်သူ ‎ r2.6.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ar:الهجوم رجل-في-الوسط
၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၇:၂၅ ၁၇:၂၅၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying pa:ਯੂਗਾਂਡਾ to pa:ਯੁਗਾਂਡਾ
၁၆:၁၂ ၁၆:၁၂၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၂‎ အရေးမကြီး ထျန်းကျင်းမြို့ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying sr:Тјенцин (град) to sr:Тјенцин
၀၅:၀၅ ၀၅:၀၅၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄‎ အရေးမကြီး ရက်ကန်းသမားငှက် ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying pl:Wikłaczowate to pl:Wikłacze
၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၈:၁၁ ၀၈:၁၁၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး ဆောင်းအောင်းခြင်းဓလေ့ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying vls:Wintersloap to vls:Wientersloap
၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၈:၅၆ ၀၈:၅၆၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ အရေးမကြီး ရှီးအန်းမြို့ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying zh-classical:西安 to zh-classical:西安市
၀၈:၂၈ ၀၈:၂၈၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၇‎ အရေးမကြီး OSI မော်ဒယ်လ် ‎ r2.6.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - gu:OSI મોડેલ
၀၆:၁၀ ၀၆:၁၀၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၄‎ အရေးမကြီး ပွေးကိုင်းပင် ‎ r2.6.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ka:სინამაქის ფოთოლი
၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၆:၃၉ ၁၆:၃၉၊ ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁‎ အရေးမကြီး ဆလာဒင် ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying vi:Saladin to vi:Ṣalāḥ ad-Dīn
၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၂၀:၀၀ ၂၀:၀၀၊ ၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ အရေးမကြီး ဂျုံ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying new:छो to new:छ्व
၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၃:၅၄ ၁၃:၅၄၊ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ကျားသစ်ကွက်တောကြောင် ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying hr:Ozelot to hr:Ocelot
၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၃:၅၅ ၀၃:၅၅၊ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ အရေးမကြီး ဂီတ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying ps:ټنګټکور to ps:سندارا
၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၃:၃၆ ၁၃:၃၆၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉‎ အရေးမကြီး လများ (အချိန်အတိုင်းအတာ) ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying cv:Уйăх (вăхăт виçи) to cv:Уйăх (вăхăт)
၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၅:၃၅ ၁၅:၃၅၊ ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅‎ အရေးမကြီး ဂျိုဟန်နက်စ် ကပ်ပလာ ‎ r2.6.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - jbo:jo'anes. kepler.
၀၈:၀၀ ၀၈:၀၀၊ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃‎ အရေးမကြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ‎ r2.6.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - bxr:Энэдхэг
၀၂:၀၉ ၀၂:၀၉၊ ၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၀‎ အရေးမကြီး ဒိုင်ယာနာ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying et:Diana Frances Mountbatten-Windsor to et:Diana, Walesi printsess
၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၇:၅၁ ၁၇:၅၁၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး အောင်လောင်ငှက် ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying id:Rangkong Papan to id:Rangkong papan
၁၃:၅၂ ၁၃:၅၂၊ ၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁‎ အရေးမကြီး ဝယ်လင်တန်၊ လော့ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying fi:Arthur Wellesley to fi:Arthur Wellesley Wellington
၀၃:၄၅ ၀၃:၄၅၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၄‎ အရေးမကြီး စိန် ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying ml:വജ്രം (നവരത്നം) to ml:വജ്രം
၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၂၀:၃၀ ၂၀:၃၀၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး Mac OS X Lion ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying ko:Mac OS X 라이언 to ko:맥 OS X 라이언
၁၁:၄၂ ၁၁:၄၂၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄‎ အရေးမကြီး အီဒါးနီမြို့ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying hr:Edirne to hr:Drinopolje
၀၀:၀၁ ၀၀:၀၁၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးမကြီး နိုဗက် ဂျိုကိုဗစ် ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying yo:Novak Djokovic to yo:Novak Đoković
၁၆:၃၁ ၁၆:၃၁၊ ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅‎ အရေးမကြီး အန်းဒရွိုက် (မိုဘိုင်းလ်စက်လည်ပတ်ရေးစနစ်) ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying ms:Android (sistem operasi) to ms:Android (sistem pengendalian)
၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၀၈:၄၂ ၀၈:၄၂၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂‎ အရေးမကြီး အင်တာနက် ပရိုတိုကောလိပ်စာ ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying kk:Статикалық IP адресі to kk:IP адрес#Статикалық IP адрес
၀၇:၀၄ ၀၇:၀၄၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၄‎ အရေးမကြီး ဂျီ-၃၆ ‎ r2.6.2) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - sq:HK G36
၀၅:၂၂ ၀၅:၂၂၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဂူဂယ် ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying ar:غوغل to ar:جوجل
၁၉:၀၂ ၁၉:၀၂၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး အမေဇုန် ကင်ဒယ် ‎ r2.6.2) (Robot: Modifying zh:金讀 to zh:Kindle
၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၀၀:၅၅ ၀၀:၅၅၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၇‎ အရေးမကြီး အိတ်ချ်တီစီ ကော်ပိုရေးရှင်း ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - uk:HTC
၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၀၆:၁၄ ၀၆:၁၄၊ ၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ အရေးမကြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - lt:Bago regionas
၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၁၇:၄၆ ၁၇:၄၆၊ ၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၈‎ အရေးမကြီး ကုလသမဂ္ဂ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - tl:United Nations
၁၆:၃၈ ၁၆:၃၈၊ ၂၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ အရေးမကြီး ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ် ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - tl:Operating System
၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၁၈:၃၈ ၁၈:၃၈၊ ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂‎ အရေးမကြီး ခမာလူမျိုး ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - pl:Khmerowie
၀၅:၃၉ ၀၅:၃၉၊ ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ အရေးမကြီး ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - bat-smg:Konfucēnėzmos
၀၇:၂၉ ၀၇:၂၉၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၄‎ အရေးမကြီး ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - lez:Гьукумат Палестина
၁၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၁၉:၄၂ ၁၉:၄၂၊ ၁၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး မက်တယ်လ်လစ်ကာ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - xmf:მეთალიქა
၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၂
၀၉:၂၀ ၀၉:၂၀၊ ၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၅‎ အရေးမကြီး အန်းဂရီးဘတ်ဒ် ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - ml:ആംഗ്രി ബേഡ്സ്
၁၉ ဇွန် ၂၀၁၂
၀၄:၅၃ ၀၄:၅၃၊ ၁၉ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၃‎ အရေးမကြီး ဓမ္မသစ်ကျမ်း ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့ ပေါင်းထည့်နေသည် - ku:Încîl တည်းဖြတ်နေသည် - vep:Uz' Zavet
၁၆:၂၀ ၁၆:၂၀၊ ၁၆ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၆‎ အရေးမကြီး ပန်းပဲ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - gl:Ferreiro
၁၅ ဇွန် ၂၀၁၂
၁၇:၅၇ ၁၇:၅၇၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၉‎ အရေးမကြီး ကိန်းဘရစ်ချ် တက္ကသိုလ် ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - kk:Кембридж университеті
၁၂ ဇွန် ၂၀၁၂
၁၉:၂၉ ၁၉:၂၉၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၀‎ အရေးမကြီး ဂျူးဇက်ပေ ဂါရီဘာဒီ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - te:గిసేప్పి గరిబాల్ది
၁၅:၃၄ ၁၅:၃၄၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၆‎ အရေးမကြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က ပေါင်းထည့်နေသည် - eml:Vietnam
၀၈:၅၇ ၀၈:၅၇၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ အရေးမကြီး မိန်းမ မျိုးပွားအင်္ဂါ ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - fa:مهبل
၈ ဇွန် ၂၀၁၂
၁၆:၄၃ ၁၆:၄၃၊ ၈ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃‎ အရေးမကြီး HTML ‎ r2.7.3) (ရိုဘော့က တည်းဖြတ်နေသည် - te:హెచ్‌టిఎమ్ఎల్(HTML)
၅ ဇွန် ၂၀၁၂
၂၂:၁၀ ၂၂:၁၀၊ ၅ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ အရေးမကြီး ယူရိုပီယမ် ‎ r2.6.5) (ရိုဘော ပြင်ဆင်နေသည: bs:Europij
၁၄:၅၀ ၁၄:၅၀၊ ၅ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ အရေးမကြီး ဒိုင်စပရိုဆီယမ် ‎ r2.6.5) (ရိုဘော ပြင်ဆင်နေသည: bs:Disprozij
၁၂:၁၀ ၁၂:၁၀၊ ၅ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၈‎ အရေးမကြီး ဂျိမ်းစ် ပရက်စကော့ ဂျိုး ‎ r2.6.5) (ရိုဘော ပေါင်းထည့်နေသည: ur:جیمز پریسکوٹ جول
၃ ဇွန် ၂၀၁၂
၂၁:၀၀ ၂၁:၀၀၊ ၃ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉‎ အရေးမကြီး ဗာဆိုင်းစာချုပ် ‎ r2.6.5) (ရိုဘော ပြင်ဆင်နေသည: krc:Версаль мамырлыкъ кесамат, tr:Versay Barış Antlaşması
၂ ဇွန် ၂၀၁၂
၂၁:၀၃ ၂၁:၀၃၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၇‎ အရေးမကြီး ဟက်စတင်းစ်တိုက်ပွဲ ‎ r2.6.5) (ရိုဘော ပေါင်းထည့်နေသည: mr:हेस्टिंग्जची लढाई
၁၆:၄၂ ၁၆:၄၂၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဘာမြူဒါ တြိဂံ ‎ r2.6.5) (ရိုဘော ပြင်ဆင်နေသည: is:Bermúda-þríhyrningurinn
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Dinamik-bot" မှ ရယူရန်